Isahluko 49 | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Ukuze kube nokusebenza ngokuhambisana, umuntu kufanele axhume ngokufanele, nokuthi abe nomdlandla nokucaca. Ngaphezu kwalokho, kufanele abe nomfutho, amandla, futhi achichime ukuzethemba, ukuze abanye bahlinzekwe futhi basuthe. Ukuze ungisebenzele kufanele usebenze njengokuhlosa Kwami, hhayi kuphela ngokulandela inhliziyo Yami, kodwa ngaphezu kwalokho ngokwanelisa izinhloso Zami, ukuze nganeliswe yilokho engikufezayo kuwe. Gcwalisa ukuphila kwakho ngezwi Lami, gcwalisa ukukhuluma Kwakho ngamandla Ami, yilokhu engikucela kuwe. Ngabe ukulandela izifiso zakho kuyabambula ubunjalo Bami? Ngabe lokho kuyoyanelisa inhliziyo Yami? Ngabe ungumuntu ozame ngempela ukuqonda inhliziyo Yami? Ngabe ngempela uzinikelele Mina? Ngabe uzikhandlele Mina? Ngabe uzindlile ngamazwi Ami?
Umuntu kufanele asebenzise ukuhlakanipha kuyo yonke ingxenye futhi asebenzise ukuhlakanipha ukuze ahambe ngendlela Yami ephelele. Labo abaziphatha ngokwezwi Lami bangabahlakaniphe kunabo bonke futhi labo abaziphatha ngokwezwi Lami bangabalalela kakhulu. Lokho engikushoyo kuyikho futhi awudingi ukuphikisana Nami noma uzame ukuqagulisana Nami. Konke engikushoyo nginawe emqondweni (noma ngabe ngiqinile noma ngithambile), uma ugxila ekulaleleni lokho kuyoba kuhle, futhi lokhu kuyindlela yokuhlakanipha kwangempela (neyokuvimba ukwehlelwa ukwahlulela kukaNkulunkulu). Namuhla endlini Yami ungahloniphi phambi Kwami bese usho ezinye izinto ngemuva Kwami. Ngifuna ukuthi ube ngokoqobo; akudingekile ukuthi usebenzise amazwi akhangayo. Kulabo abangokoqobo, kukhona konke. Kulabo abangenjalo, akukho lutho. Ngisho umzimba wabo uyobuyela ekushabalaleni nawo, ngoba ngaphandle kokuba ngokoqobo, akukho lutho; ayikho enye incazelo.
Okholweni lwenu kuNkulunkulu, ngifuna nizimisele futhi ningacabangi ngalokho eningakuzuza noma nilahlekelwe yikho, nakho konke eninakho; kufanele nifune ukubeka izinyawo zenu endleleni yangempela, futhi ningaxegeli muntu noma nilawulwe yinoma ngubani. Lokhu kwaziwa njengokuba yinsika yebandla, umnqobi wombuso, kodwa ukwenza ngokunye kusho ukuthi awufanele ukuphila phambi Kwami.
Izimo zingehlukana, njengezindlela zokuba seduze Kwami. Abanye abantu bathanda ukusho amazwi azwakala kamnandi futhi bazenze abazinikeleyo ebusweni Bami. Nokho, ngemuva bawumonakalo ophelele futhi amazwi Ami awekho nhlobo kulokho abakwenzayo. Bayenyanyisa futhi bayacasula; akunakwenzeka ukuthi bangalethela umuntu ukufundisa okunosizo noma babe nento abangayinikeza. Anikwazi ukucabangela inhliziyo Yami futhi lokho kungenxa kuphela yokuthi anikwazi ukuba nokusondela noma ukuhlanganyela okwengeziwe Nami, ningenza ngikhathazeke futhi ngisebenze kanzima njalo egameni lenu.
Okwedlule: Isahluko 48
Okulandelayo: Isahluko 50